Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Ihe ngosi TV ọkacha mmasị nke Brits na-atụnye ụtụ na nnukwu arụkwaghịm
Nchoputa ohuru na echiche ndi okachamara choputara na FutureLearn.com gosiputara ka ihe onyonyo onyonyo na mgbasa ozi nwere ike isi na-akpali ndi Briten ime nhọrọ oru di iche iche yana ka omenala pop si emetụta ulo akwukwo, nkuzi na oru.
Mkpọchi ọtụtụ na ịrụ ọrụ site n'ụlọ emeela ka ọtụtụ ndị Briten nwee oge iji na-eme ihe ngosi TV na ugbu a, nyocha ọhụrụ sitere na FutureLearn na-ekpughe otu ha si bụrụ ihe na-enye aka na ihe ndị mmadụ chọrọ ịmụta na ụzọ ọrụ ha na nhọrọ ha ga-ekwe omume.
N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ abụọ n'ụzọ ise (39%) nke ndị Briten nwere mmasị na Bridgerton kwesịrị ekwesị maka akwụkwọ akụkọ ya, Squid Game maka ngwọta nsogbu ya na-adọrọ mmasị (33%) na Mgbe ndụ gasịrị maka ịbịaru nso na iru uju (40%), enwere ike inwekwu. maka ọdịmma mba na ihe ha na-eme nke ọma na ọrụ amamihe. Ihe ngosi TV na-ejide UK n'ezie na-ekwu karịa maka ndị Britain karịa ka ha chere, na nke a nwere ike ịbụ ihe kpatara nnukwu arụkwaghịm dị ka anyị si mara ya ugbu a?
Ka nnukwu arụkwaghịm na-aga n'ihu na-ata ahụhụ na ndị Briten na-eche na ejighị n'aka maka ụzọ ọrụ ha, nyocha ọhụrụ sitere na ikpo okwu mmụta n'ịntanetị kachasị na UK, FutureLearn.com, na-egosi otu ihe ngosi TV anyị hụrụ n'anya, nwere ike bụrụ azịza nye ebumnuche ọrụ anyị.
Ọkachamara mmụta gbasara mmụọ, Dr Kairen Cullen, na-akọwa ihe kpatara ịdọrọ ya na ihe ụfọdụ nke ihe nkiri TV nwere ike ime ka ndị mmadụ nwee ike ime nke ọma n'ụzọ ụfọdụ ọrụ, na-enyere ndị na-amaghị ebe ha ga-amalite ịme nzọụkwụ mbụ n'ịgbanwe ọrụ.
Ihe ngosi dị ka agụmakwụkwọ mmekọahụ aghọwo ihe a ma ama n'ihi ụzọ ha si aga isiokwu dị ka mmekọahụ na okike na-eme ka ọ dị mfe ikwu okwu dịka 36% nke ndị Briten. A na-ahụkwa isiokwu ndị dị otú a na ọrụ onye na-ahụ maka ọgwụgwọ yana usoro ọmụmụ dị ka mmekọrịta ụwa ọnụ: Mmekọahụ, Ike, Gender na Mbugharị.
Mgbe ụfọdụ, mmetụta nke ihe nkiri TV na-amasịkarị gị adịghị apụta ìhè, dị ka a na-ahụ na otu ụzọ n'ụzọ ise nke ndị Briten na-ekiri Igbu Iv n'ihi na ọ na-eme ka ha chọọ ịgagharị ụwa. Na FutureLearn's Intro to Travel and Tourism course, Brits nwere ike ime ka nrọ ahụ bụrụ eziokwu.
Inwe ụtọ ụwa echiche efu nke edobere Game of Thrones (68%) na-egosipụta nka agụmakwụkwọ na-adịchaghị ala dịka mmepụta. Mmasị zuru oke maka ọrụ na mmepụta ihe nkiri, n'ihi ya na-ewere ọkụ, igwefoto, Kọmputa - Action! Kedu ka teknụzụ dijitalụ si agbanwe ihe nkiri, TV, na egwuregwu nwere ike ịbụ nzọụkwụ mbụ ịbanye n'ọhịa ahụ.
Na gburugburu 27 Nde ezinụlọ na UK nwere ohere a telivishọn *** ghara ikwu ọnụ ọgụgụ nke mobile phones na mbadamba na ndị mmadụ ugbu a ohere ikiri ihe nkiri TV na, mmetụta mmemme nwere na ndụ kwa ụbọchị doro anya. Site na nhọrọ ejiji ruo na egwu anyị masịrị anyị, enwere ihe maka onye ọ bụla, gụnyere ụzọ abụọ n'ụzọ ise nke ndị Briten na-ekiri Dọkịta Onye na-enyocha oghere na ya mere ọ ga-abụ na ọ ga-achọta ọrụ na Astrobiology na-emezu site n'inwe ndụ na Mars N'ezie.
Astrid deRidder, Onye isi ọdịnaya na FutureLearn, kwuru: “Na FutureLearn, ebumnuche anyị bụ ịgbanwe ohere agụmakwụkwọ. Ọrụ ndị dị ka nke a na-egosipụta ka agụmakwụkwọ, ọdịmma onwe onye na ndụ kwa ụbọchị na-aga aka na otu ihe ọ bụla nwere ike isi nwee mmetụta na nke ọzọ. Site na ijikọ ihe ngosi TV ndị mmadụ na-amasịkarị na ihe mere ha ji adọta ha na nkuzi na ụzọ ọrụ, ọ na-egosi ndị mmadụ na ha nwere ike ịzụ ma rụọ ọrụ na mpaghara ha nwere mmasị n'ezie. "
Dr Kairen Cullen, Debanyere Ọkachamara Ọkachamara Ọkachamara (Educational), kwuru, sị: “Omenala ndị a ma ama, dị ka e gosiri na ihe nkiri TV, na-egosipụtakarị na nhọrọ mmụta nke na-akpali ndị mmadụ n'otu n'otu na nhọrọ agụmakwụkwọ, nke ha na-eme. Usoro ikiri TV kwa ụbọchị nke ndị mmadụ n'otu n'otu na-enye nghọta bara uru banyere nhọrọ ọrụ enwere ike maka ha. Ogo nke mmasị ndị a na-egosipụta mmasị ndị mmadụ na ihe omume na ọrụ ndị a họọrọ ga-adịgasị iche n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu mana ọ bụ mmega ahụ bara uru iji mee ka ìhè pụta ìhè na nhọrọ ntụrụndụ a na iji ihe anyị na-achọpụta n'ịtụle ọmụmụ ihe dị iche iche na nhọrọ ọrụ n'ọdịnihu."
Ọzọ na: Tourism | Education | Technology
Education Technology Tourism
Nhọrọ nke oge adịghị ọnụ ala achọrọ maka Gen Z na...
Ụdị Saudi Arabian na-aghọ usoro njem nlegharị anya ọhụrụ
Air Canada na-ekwupụta echiche 2022 maka nke a…
Data ọhụrụ gbasara ọgwụgwọ ọrịa Alzheimer